မှူးထံမှBüyükakın Yahya ၏ဓါတ်ရထားဖျေါပွခကျြ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[16 / 08 / 2019] Derbent ဘူတာရဲ့အဆုံးမှာအောက်တိုဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်	41 Kocaeli
[16 / 08 / 2019] Eskisehir အတွက်လက်လှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Facility	26 Eskisehir
[16 / 08 / 2019] ငွေအဘို့ရာထူး Run ကိုအားဖြင့် TCDD န်ထမ်းများလစာ,	06 တူရကီ
[16 / 08 / 2019] Boztepe cable ကိုကားများနှင့်အားလပ်ရက် Density ကို Reverse မူလစာမျက်နှာ	52 ကြည်းတပ်
[15 / 08 / 2019] စူပါလိဂ်ပွဲစဉ်သွားဖို့အလွန်လွယ်ကူမှုနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ရထားလိုင်းများ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliမှူးBüyükakınထံမှ Yahya ၏ဓါတ်ရထားဖျေါပွခကျြ
မှူးBüyükakınထံမှ Yahya ၏ဓါတ်ရထားဖျေါပွခကျြ
11 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား 0
Yahya ကပ္ပတိန်ပေါ်လာတာဟာအရင်ဖော်ပြချက်ကနေ Ursa ဗိုလ်မှူး
Marmara နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စု။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, Izmit Yahya Kaptan အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကသမ္မတ Ahmet Yavuz နှင့် Yuvam အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုကသမ္မတကိုအာဒံအဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု Elbas အရှေ့ Marmara အကောက်ခွန်နှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Mehmet လီ Arslan နှင့်ကြိုတင်ကာလအတွက် AK ပါတီ Izmit ကောင်တီကော်မရှင်နာ Hasan Ayaz အာဏာပိုင်များ၏ဧည့်သည်များဖြစ်ကြသည်။ အနီးကပ်သမ္မတBüyükakınမြို့နှင့်တိုင်းပြည်အကဲဖြတ်နှင့်အတူ related သည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်ဧည့်သည်များ, သူရထားလမ်းစနစ်၏တန်ဖိုးသည်မြို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းရထားစီမံကိန်းအကြောင်းတီဗီ 41 နိုင်ငံတော်သမ္မတBüyükakın, များစွာသောရှုထောင့်များတွင်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များအပေါ်ထိမိကြောင်းအထူးအစီအစဉ်၏အစီအစဉ်အပေါ် Alikahya ရှင်းလင်းချက်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
"50 THOUSAND ခရီးသည် GO ကြိုတင်သိမြင်နေသော်လည်းဖြစ်ပါတယ်"
"Izmit ဗဟိုဌာန၏Akçarayလမ်းရထားလိုင်းကို extension ကိုအလုပ်ဆက်လက်" ဟုသူက "အသိပညာလွှဲပြောင်းBüyükakınနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှဗိုလ်ကြီး Yahya နှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Slots အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကို၏ဆောက်လုပ်ရေး Kurucesme မှတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့, မြို့ဆေးရုံ၏ Mehmet လီ Pasha သည်အထိတိုးချဲ့မည့်တစ်လိုင်းတစ်လိုင်းရှိသည်။ စီးတီးဆေးရုံနေ့စဉ် 50 တထောင်ခရီးသည်သွားကြဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားရာ၏နောက်ထပ်လိုင်း Kocaeli အတွက်အသစ်အ Alikahya အားကစားကွင်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လေးနက်ခရီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ EDOK command ကိုကနေအနာဂတ်အတွက်နယူးရုံး။ အဆိုပါရုံးရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသွားအလာအလွန်လေးနက်သောအမှုရှိရေးလိမ့်မယ် "ဟုသူကရှင်းပြသည်။
"Alikahya ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Kocaeli အားကစားကွင်း၏ဒေသ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းရထားလိုင်းကိုနှင့်တရားရုံးအဲဒီဒေသမှာသွားတာပေါ့," မြို့တော်ဝန် Assoc ကဆိုသည်။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, "ဒီလိုင်း Yahya မှူးချသင်္ကေတစျေးဝယ်စင်တာမှဆင်းမှန်ကန်သော Is နောက်ဘက်မှဒါမှမဟုတ် terminal စက်ရုံများသို့တက်သွားထိုအရပ်မှ access ကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းလေ့လာမှုများဆက်လက်အကြောင်းကို Alikahya သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလိုင်းများနောက်ဆုံးရှိပြီးနောက်။ သစ်သားဧရိယာအားဖြင့်ရှိသွားကြဖို့သင်္ကေတ AVM ကိစ္စတွင်။ ငါတို့သည်အချို့သောသစ်ပင်များ၏ဧရိယာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်နိုင်ငံသားများနှင့်အတူရှိသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများတစ်ခုမှာ။ ကြောင်းဒေသတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏လူစီမံကိန်းကိုမပါဘဲပြောပြီခံရဖွယ်ရှိမဟုတ်နှင့်အတူသူစကားပြောသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်ဒေသတွင်း၌မပါဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြတ်သန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှစီမံကိန်းကိုအပြီးသတ်သို့မဟုတ်အခုစကားပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမကခဲတံလေ့လာမှုများ, အဘယ်သူမျှမပြတ်သားစီမံကိန်းကို applications များလွန်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာကြည့်ပါ။ ဤရွေ့ကားသဘောပေါက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဆွေးနွေးမှုစတင်နိုင်ရန်မလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Yahya Kaptan အတွက်Büyükaktenသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့စကားကသူဆက်လက်အဖြစ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုသူတို့အဆင်ပြေပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမပြတ်သားစီမံကိန်းကိုမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရှိပါတယ်။ အခြေအနေကို therethrough ရှောက်သွားဖို့ပိုကွန်ကရစ်ဖြစ်ပေါ်လျှင်ပြောပြီ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာထိုင်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ကျနော်တို့အဲဒီမှာပရောဂျက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ယူကြပြီ။ သာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းလေ့လာမှုများလည်းမရှိ။ terminal ကို Alikahya ၏နောက်ဘက်၏ထက်အခြားတစ်စုံတစ်ဦးက, အားကစားကွင်းအောင်မြင်ရန်အနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်ရုံးနှင့်အလုပ်ရှိသေး၏။ ဒါပေမယ့်မြို့ဆေးရုံသွားဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းကြောင်းဖြစ်လာနှင့်ငါတို့လိုင်းလျှောက်လွှာစီမံကိန်းများကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ "
Yahya Tram ဆန့်ကျင်မမှူး 30 / 07 / 2019 CHP Izmit Yahya Kaptan အိမ်နီးချင်းညီလာခံတွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Remzi Ozkan, ထိုရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းရထားတင်းမာမှုနှင့် ပတ်သက်. မကြာသေးမီကာလ၌ "ကျနော်တို့လမ်းရထားဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်များသဘောပေါက်အဖြစ်အစိမ်းရောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် "ဟု CHP ခရိုင် Assembly အစီရင်ခံစာ Ozturk အဆိုအရÖzgürkocaeliထံမှ Cemalettin ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုစုဝေးစေကဆိုပါတယ်" ဟုအဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကိုအကြောင်းကို Izmit Yahya နေထိုင်သူများဗိုလ်ကြီးရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့သစ်သားဧရိယာ၌လုပ်ရမည်ကျနော်တို့နောက်ကျလမ်းရထားရက်သတ္တပတ်လွန်သွားပါလိမ့်မယ်အရေးဆိုမှုအခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ် ထင်းဧရိယာထဲမှာပျော်ပွဲစားရန်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလမ်းရထားပေါ်တွင် CHP အိမ်နီးချင်းညီလာခံတွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယခင်ညနပေိုငျး, အ CHP ဗိုလ်ကြီး Yahya ကိုယ်စားလှယ်များရပ်ကွက်အတွင်း, အ CHP တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ညီလာခံတွင်အင်္ဂါများ၌စုဝေးရောက်လာကြ၏ ...
ဗိုလ်ကြီး Yahya သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်တွင်နေထိုင်သူများကိုဖန်ဆင်း 10 / 02 / 2016 ဗိုလ်ကြီး Yahya နေထိုင်သူများသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း: ဓာတ်ရထားစီမံကိန်းအားဗိုလ်ကြီး Yahya ၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်တွင်နေထိုင်သူများဖွဲ့သောလုပ်ရပ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းသစ်ပင်များ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းဆန့်ကျင်အကြောင်းကို 1 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ, "ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအခန်းမှအရာကိုဆုံးရှုံး" ဟုအဆိုပါလမ်းရထားစီမံကိန်းအားဆိုသည်ကား, သစ်ပင်များနှင့်လုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့သူအရေးယူ Yahyakaptan နေထိုင်သူများ၏ 1 ရက်သတ္တပတ် ပတ်သက်. ဖြတ်တောက်ခြင်းဆန့်ကျင်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းကိုယ်စား Prestige ၏ Yahya ဖော်ပြချက် Atilla Yüceakလုပ်ခဲ့တယ်မှူးအတွက်ကဖီးအတွက်အတူတကွလာမယ့်ခဲ့သည်။ Yüceak "ကျနော်တို့ကလူလက်တဆုပ်စာထက်နည်းနေပေမယ့်ကျနော်တို့ရိက္ခာများထဲမှကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူစွာခုခံကြပါပြီ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဆုံးရှုံးဘာကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်အသရေအောင်မြင်ပြီဟုပြောနိုင်။ ...
ဧဝံဂေလိတရားကိုBüyükakınကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတUlaşımparkန်ထမ်း 29 / 05 / 2019 Ulaşımpark Inc က အလုပ်လုပ်သည့်န်ထမ်းများ၏ 785 1 အကျိုးစီးပွား။ စုပေါင်းညှိနှိုင်းအရေးဆိုသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakınနိုင်ငံတော်သမ္မတ Ergun Atalay နှင့်ulaşımpark Inc ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စုပေါင်းညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်ထဲမှာသဲသောင်ပြင်လမ်းမကြီးကားဂိုဒေါင်အကြားရှိ Turkish အဘိဓါန်အလုပ် လည်းပါဝင်ပတ်သက်န်ထမ်းများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများမှတက်ရောက်ခဲ့ပြီးခဲ့သညျ။ အဆိုပါဝန်ပိုသို့မဟုတ်လစာအပိုဆုကြေးငွေ၏ဧဝံဂေလိတရားကို၏အဘို့ဆောင်သောပွဲပေးသောစာချုပ်မှပေါ်ထွက်လာသောခြားနားချက်ပေးဆောင်ခံရဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးအခမ်းအနားရှေ့တော်၌, Metropolitan မြို့တော်ဝန်Büyükakınထိုပွဲကိုခံ။ သို့သော်တူရကီ-စီးပွားရေးအထွေထွေနိုင်ငံတော်သမ္မတ Ergun Atalay လည်းသူကအလုပျသမား5ကနေလစဉ်ပြည်ထောင်စုအခွန်အခလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ အလုပ်သမားများအလုပ်သမားများ၏ Turkish အဘိဓါန်စီးပွားရေး-စီးပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှခညျြနှောငျမီးရထား၏ 785 ပါဝင်သည် ...
ယာဉ်မောင်းBüyükakınထံမှသူရဲကောင်း plaque 21 / 06 / 2019 Marmara နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Assoc ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စု။ ဒေါက်တာ သူ့ရုံးခန်းထဲမှာသညျယရှေု Lightning ဧည့်သည်များအားဖြင့်ချီးကျူးထိခိုကျဒဏျရာမရှိဘဲulaşımpark Inc ကအရာရှိများကယ်တင်တတ်၏မောင်းထုတ်ရန်သုံးနာရီကြာအဗ္ဗဒူလာမိသားစုမော်တော်ယာဉ်အတွက်ဧည့်သည်များအားဖြင့်မေ့လျော့ငါးနှစ်အရွယ်အနည်းငယ်သာအတွက် Tahir Büyükakınမော်တော်ယာဉ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်GökmenMengüçနှင့်Ulaşımparkလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ Zafer Aydin လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအာရုံကိုBüyükakınအတွက်သူဘတ်စ်ကားမောင်းသူ Lightning အရပျ၏ကျင်းပနေ, "ကျွန်ုပ်တို့၏အများဆုံးမူလတန်းရည်မှန်းချက်ကျနော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖို့ရညျအသှေးထုံးစံ၌အစေခံရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မိတ်ဆွေများကိုဒီရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပျသပေးခြင်းပါပဲ။ သောသူတို့သည်တစ်ဦးချင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုအမှု၌ ...
ဘတ်စ်ကားဗိုလ်ကြီးအလုပ်အကိုင်ရှေ့ပြေးအဖြစ်လေးစားရမည် 08 / 07 / 2013 ဘတ်စ်ကားဗိုလ်ကြီးရှေ့ပြေးအလုပ်အကိုင်ဘတ်စ်ကား၏ကပ္ပတိန်အဖြစ်လေးစားရမည် IETT ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဖျောအလုပ်အကိုင် piloting ကဲ့သို့ဂုဏ်သရေရှိရာအရပျရပျသငျ့ Hayri Baraçlı "ပို့ဆောင်ရေးအကယ်ဒမီစီမံကိန်း" ကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှု, သူကပြောသည်။ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရည်အချင်းများအာဏာပိုင် (Myke) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကော်မတီ, Professional ကစံချိန်စံညွှန်းများ Metrobus ဒရိုင်ဘာ, ဒေသခံ Transit ဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်း, ထိုဗင်၏ယာဉ်မောင်းတက္ကစီယာဉ်မောင်းများနှင့်ကားမောင်းသမားဝန်ဆောင်မှု Tool ကိုKağıthaneလူမှု်ဆောင်မှုများအတွက် Professional ကစံချိန်စံညွှန်းဆွေးနွေးရန်သိမ်းယူကြ၏။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာ IETT နှင့်အတူတွေ့ဆုံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Hayri Baraçlı, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအကြံပေးပါမောက္ခ အမျိုးသားပညာရေး Mustafa Karaşahin ...
ပံ့ပိုးမှုမှဗိုလ်ကြီး Yahya လုပ်နေဆဲလက်မှတ်ကမ်ပိန်းကနေ MMO 09 / 08 / 2019 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ Murat rower နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များလမ်းရထားလမ်းကြောင်းဗိုလ်ကြီး Yahya အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုများအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလက်မှတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးထောကျပံ့အားပေးတော်မူ၏။ Rower ဒီနေရာမှာအရေးပါတဲ့ရှင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီး Yahya လမ်းကြောင်းဆက်လက်အဆိုပါလမ်းရထားများ၏အစားထိုးများအတွက်ပလက်ဖောင်းများကဖြန့်ချိသူအပေါင်းတို့ကိုလက်မှတ်ကမ်ပိန်း။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတ Murat rower လည်းရပ်မယ့်အားဖြင့်ထောက်ခံမှုလက်မှတ်ပေါင်းအပ်ပေးတော်မူ၏။ Selcuk Karstarl နှင့်အတူ MMO ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ rowers, Huseyin Celik, Serkan Demir နှင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ Serkan ကုန်းပြင်မြင့်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ထပ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆန်ဆန်ချဉ်းကပ်သူတို့စီမံကိန်းဆန့်ကျင်နေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်လက်ရှိလမ်းရထားလမ်းကြောင်း၏အစားထိုးဖော်ပြ ...
Büyükakınလမ်းရထားစိတ်လှုပ်ရှားမှု 05 / 08 / 2015 Büyükakınလမ်းရထားစိတ်လှုပ်ရှားမှု: ရထားစနစ်များ, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ပြားချပ်ချပ်ဒေသများရှိ ထား. ငါလူစည်ကားမြို့, မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ပြဿနာများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်များကိုအကြောင်းကိုငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်မြို့ထဲသို့ကျဆင်းသွားနေကြသည်။ minibüsçüယဉ်ကျေးမှု, စာရိတ္တ, သင်ကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကဖော့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရှိသည်ဖို့နှစ်ပေါင်းခံစားနိုင်။ ၏သင်တန်း, ဒီမွို့၌အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့အဘယ်သူမျှမသစ်ကိုရှေးခယျြစရာဖြစ်ပါသည်, သစ်တစ်ခုနှင့်သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်, ငါသည် Izmit, system- အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အလမ်းရထား-အလင်းရထားလမ်းမဟုတ်ဖြေရှင်းချက်၏ဆေးညွှန်းထင်ပါတယ်။ ဤမြို့၌ဓါတ်ရထား, သင်မူကားအရှေ့အနောက်လမျးညှနျခ run နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မြို့တော်ရဲ့ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
BüyükakınAkçarayဓါတ်ရထားစီမံကိန်း၏လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိ 29 / 08 / 2016 ဓါတ်ရထားစီမံကိန်း၏လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိBüyükakınAkçaray: Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Assoc ။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakın, လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်ဦးကBüyükakın, ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်GökmenMengüç, အထွေထွေညှိနှိုင်းရေးမှူး Adnan Bilgiçနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကိုသမ္မတ Mustafa Altai ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်Akçarayဓါတ်ရထားစီမံကိန်း Interchange စက်ရုံပြင်ပရေးစင်တာတို့ကလုပ်ခံရဖို့ဆက်လက်Büyüak, ရေအိုင် Asar Dere မွေးမြူရေး, Goodyear လမ်းဆုံအလုပ်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ AKÇARAYအံသတင်းအချက်အလက်များကွဲပြားခြားနားသောဒေသများတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းထောနှင့် Co-ထုံးစံAkçarayမှာစီမံကိန်းနှင့်ပါမောက္ခများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးများကမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Tahir Büyükakınစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ...
ဗိုလ်ကြီး Yahya ထိုအခါလမ်းရထားသူ Work regrouping ဖြစ်ပါတယ် 05 / 06 / 2017 ဓါတ်ရထားထိုအခါဗိုလ်ကြီး Yahya လေ့လာမှု regrouping ဖြစ်ပါတယ်: ဓာတ်ရထားလမ်းတစ်နှစ်နီးပါးအဘို့အကြောင့်အရာကနေတဆင့်လမ်းရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းများပေါ်တွင်ပြုပြင်အလုပ်၏အဆုံး Izmit Yahya Kaptan ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းများ၌သိသာအခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသောဆောက်လုပ်ရေးရန်။ လမ်းပေါ်မှာနှင့်ဗိုလ်ကြီး Yahya မှလမ်းပေါ်မှာရပ်ကွက်အတွင်းရေးဆွဲ Line, ကတ္တရာအလောင်းတော်ထားကီလိုမီတာလမ်းကြောင်း၏စုစုပေါင်း312.500 တန်ချိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ray အဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်အသွားအလာမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်လမ်းများတင်ကြ၏။ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအရာရှိတွေဒီလလမ်းလမ်းရဲ့အဆုံးမှာမျဉ်းရေးဆွဲရန်, သစ်ကိုလမ်းဆုံအသွားအလာအလင်းအိမ် installed ပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်လမ်းများနှင့်လမ်းကြားပြီးနောက်ဗိုလ်ကြီး Yahya စျလာမယျ့ Boulevard ASFALTI လာမည့်ရက်သတ္တပတ် Gazi ၏မြို့တော်အဖွဲ့များ Akdeniz ခရိုင် ...
ဗိုလ်ကြီး Yahya ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓါတ်ရထားမှခုခံစတင် 20 / 07 / 2019 ပြည်သူ့ Yahya Kaptan Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းရထားလိုင်းကိုဦးစီးဌာနတို့ကစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်စီမံကိန်းအတွက်လိုင်းလမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းကို၏ကျမ်းပိုဒ်မှခုခံ၏ဒုတိယအဆင့်ကိုလိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၏စီမံကိန်း Yahya နေထိုင်သူများအဘို့အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများထဲမှဤအချိန်မှာကပ္ပတိန်မတိုင်မီအရေးယူရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့ပြီးအဖြစ် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လမ်းရထားလိုင်းကို (Akçaray) ဒုတိယအဆင့်စဉ်းစားသည် "နံနက်စာရက်နေ့တွင်, thermos ဖမ်းပြီးလာ" ဟုပျော်ပွဲစားရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူသစ်ပင်များအောက်မှာ။ ဗိုလ်ကြီး Yahya လမ်းလျှောက်အတွက်တနင်္ဂနွေ, ဇူလိုင်လ 21 11.00 နာရီပေါ်ပျော်ပွဲစား, သင်္ကေတဟာ AVM အနှံ့ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ပျော်ပွဲစားစီမံကိန်းလမ်းကြောင်းအတွက် 500 အနီးသစ်ပင်များ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အသိအမြင်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါလမ်းရထားလိုင်းကို extension ကို၏လုပျငနျးAkçaray
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ 11 1930 Zile Beaver လိုင်း
အဆိုပါ6K သည်စမတ် Stop သန့်ရှင်းရေး Bilecik မြူနီစီပယ်လေ့လာမှုအတွက်
Eskisehir အတွက်လက်လှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Facility
ငွေအဘို့ရာထူး Run ကိုအားဖြင့် TCDD န်ထမ်းများလစာ,
Karamursel Semet တံတားပြီးစီး
Boztepe cable ကိုကားများနှင့်အားလပ်ရက် Density ကို Reverse မူလစာမျက်နှာ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: တူရကီဘဂ္ဂဒက်မီးရထားအတွက်သြဂုတ်လ 16 1908 နှစ်ပေါင်း
Yahya Tram ဆန့်ကျင်မမှူး
ဗိုလ်ကြီး Yahya သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်တွင်နေထိုင်သူများကိုဖန်ဆင်း
ဗိုလ်ကြီး Yahya ထိုအခါလမ်းရထားသူ Work regrouping ဖြစ်ပါတယ်
ဗိုလ်ကြီး Yahya ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓါတ်ရထားမှခုခံစတင်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (245) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (827) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (734) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)